6 bilood ayay qaadan kartaa mideynta reeraha | Somaliska
Warar kala duwan ayaa laysla dhexmarayay beryahaan dambe iyadoo warbaahinta Soomaalida qaargood laga sheegay in Soomaalida shuruuda laga qaadayo mudo isbuucyo ah. Warbixintaas meesha laga keenay anaga ma ogin. Waxaan aad u daba galnaa arimahaan balse ma aanan maqal cid noo xaqiijisa waqti cayiman oo la xalinayo arinta Soomaalida marka laga reebo "sida ugu dhaqsiyaha badan". Gunvor G Ericson waa mudane ka tirsan baarlamaanka qaasatan gudiga arimaha Bulshada oo u fadhiya xalinta arinta Soomaalida, mar ay la hadashay wargeyska Kkuriren ee ka soo baxa Katrineholm ayay sheegtay in ay qorsheynayaan sidii xal loogu heli lahaa arintaan iyadoo intaas ku dartay in muhiimada koowaad la siinayo danaha caruurta. Waxay sheegtay in sharciga bedalkiisa ay waqti qaadato oo ugu yaraan 6 bilood ay qaadan karto in isbedel la sameeyo. Hadalka Gunvor ayaa la dhihi karaa waa midka ugu xaqiiqada dhow ee arintaan ku saabsan maadaama ay ka tirsantahay gudiga ku shaqada leh arintaan, isla markaana ay xubin ka tahay xisbiga Miljöpartiet oo hogaanka u haya arinta Soomaalida. Si kastaba ha ahaatee, 6 bilood ayaan ahayn waqti sidaa u sii dheer balse su'aashu waxay tahay ma dhici doontaa in waqtigaas ka dib ay midoobaan waalidiinta iyo caruurtooda kala maqnaa mudo dhowr sano ah. Sheyga keliya ee wax ka badali kara xaalada Soomaalida ayaa lagu sheegay in uu yahay sharci cusub.
Warar kala duwan ayaa laysla dhexmarayay beryahaan dambe iyadoo warbaahinta Soomaalida qaargood laga sheegay in Soomaalida shuruuda laga qaadayo mudo isbuucyo ah. Warbixintaas meesha laga keenay anaga ma ogin. Waxaan aad u daba galnaa arimahaan balse ma aanan maqal cid noo xaqiijisa waqti cayiman oo la xalinayo arinta Soomaalida marka laga reebo “sida ugu dhaqsiyaha badan”.
Gunvor G Ericson waa mudane ka tirsan baarlamaanka qaasatan gudiga arimaha Bulshada oo u fadhiya xalinta arinta Soomaalida, mar ay la hadashay wargeyska Kkuriren ee ka soo baxa Katrineholm ayay sheegtay in ay qorsheynayaan sidii xal loogu heli lahaa arintaan iyadoo intaas ku dartay in muhiimada koowaad la siinayo danaha caruurta. Waxay sheegtay in sharciga bedalkiisa ay waqti qaadato oo ugu yaraan 6 bilood ay qaadan karto in isbedel la sameeyo.
Hadalka Gunvor ayaa la dhihi karaa waa midka ugu xaqiiqada dhow ee arintaan ku saabsan maadaama ay ka tirsantahay gudiga ku shaqada leh arintaan, isla markaana ay xubin ka tahay xisbiga Miljöpartiet oo hogaanka u haya arinta Soomaalida.
Si kastaba ha ahaatee, 6 bilood ayaan ahayn waqti sidaa u sii dheer balse su’aashu waxay tahay ma dhici doontaa in waqtigaas ka dib ay midoobaan waalidiinta iyo caruurtooda kala maqnaa mudo dhowr sano ah. Sheyga keliya ee wax ka badali kara xaalada Soomaalida ayaa lagu sheegay in uu yahay sharci cusub.
Kamuunka Katrineholm oo ka cabanaya qarashka ku baxaya mideynta reeraha Soomaalida
Asc jimcale sxb waxan ugartay wa dadka is dhalay bis o kala maqan arintan 6 bil lo qabtay in xal loga garo kuwa isqabo ayaka maxa u hesa?
asc waxan salaamayaa dhamaan muslimiinta gaar ahaan wallaalaheyga somaaliyeed meel kasta ay dunida ka joogaan qaasatan wallaalkey jimcaale wlhi waa arin run ahaantii nawada farxadgelisey hadey ahaan leheyd kuwa caruurta isku dhaley iyo kuwa hada isa soo guursadeyba waayo waxan ogsoonahey hadii la qado sharuuda basaborka oo runtii caqabada nagu eheyd ninka soo fikirey kuwa ku tashkiiliyeyba allaah soo hanuuniyo ayaan oran lahaa had iyo goor waxan u taaganahey sidaan u midoobi leheyn insha allaah wey imaan doontaa wad salaaman tihiin
asc jimcaale waxan ku weydiiyey adigoo raali ah goormey ka hadashey arintaan mahadsanid
wa arin wanag san saxib
May 30, 2011 at 18:19
Asc jimcale sxb nama weli ayantan websiteka waxbadan maso gudbiside 6bilod waaba nagu badantahay 10 beri gudahoda aya wax la idinkugu qaba dheh mahadsanidin
Sadaq: way ku jiraan waxa loo doodayo in guud ahaan Soomaalida shuruuda laga qaado balse maadaama caruurta ay sharci ahaan qiimeeyaan dadkaan iyaga ayaa xooga la saaryaa.
Omar: waxay la hadashay wargeyska jimcadii.
Kkk war dadkan waxba inoo maso wadan malinba midbaa mel ka qayliya si layno qanciyo
May 30, 2011 at 20:35
As waan idiin salaamey dhamaan walaalaha .jimcaale waxaan ku weey diinaya goormee kabelaamaneey 6 bilod
maxmed aweys maxamed says:
asc dhamaan sxbta iyo aqristayaasha somaliska
waxaan rajeenyaa in mar uun waqtiga is badi doono in sha.allaah ruuxii calaf ama cunadiisa ka qoran tahay wuu tagi doonaa waana la mideyn doonaa walidiinta iyo caruurta kala maqan 6 bil ka badan ayee kala maqan yihiin walidiinta iyo caruurtooda
June 3, 2011 at 08:04
asc walalayaal, marka hore dhib ayeey nagu noqotay kala maqnaashaha mudada qaatay tan kale waxaaba imaan karta in ninkii iyo xaaskiisii ay isku dhacaan iyadoo sabab u noqon karto kala maqnaashaha oo dumarku waa dulqaad yar yihiin ayba dhacdo inay tiraahdo sxb aniga waad i nacdaye ama naago kale ayaad meesha ku haysataa taasina waa dhibaato kale oo soo foodsaari karta ilmihii ay dhaleen labada qof oo ay aabbe iyo hooyo u ahaayeen halkaasna qoyskii ku kala tagaan… bal maxay idin la tahay taasi aragtidiina ..wcsalam